Ukukhetha iziqu zezingane zegumbi lezingane | Hlobisa
Ukukhetha iziqu zezingane zegumbi lezingane
USusy fontenla | | Izithako, Hlobisa, Umhlobiso wezingane
Ngesikhathi sika khetha izindwangu ekamelweni lezingane sinamathuba amaningi. Namuhla kunezindwangu ezenzelwe bona, amakhushini anezimo ezimnandi, izindwangu ezimibalabala, amaphethini amahle neminye imibono eminingi. Enye yezingubo esizithola zishintshashintsha kakhulu embhedeni wakho iziqu zezingane.
Lezi iziqu zezingane zingasetshenziswa ngesikhathi sekhefu futhi zihlala zikhona. Akufanele zididaniswe neduvet, ephethe isembozo seduvet. Ama-quilts namuhla alula impela futhi asetshenziselwa lezo zikhathi lapho kungabandi futhi kungashisi. Ngakho-ke manje sesingahamba siyofuna i-quilt yezingane efanelekile embhedeni wazo phakathi kwamathuba amaningi esiwanikezwa wona.
1 Kungani ukhetha ama-quilts ezingane
2 Ungazithenga kuphi iziqu zezingane
3 Iziqu zezingane ngamathoni ayisisekelo
4 Izinti zezingane eziphrintiwe
5 Iziqu zezingane ezinemiklamo
6 Ama-quilts ama-cribs
7 Ungahlanganisa kanjani ama-quilts wezingane negumbi
Kungani ukhetha ama-quilts ezingane
Kuyiqiniso impela ukuthi ngokufika kwamaNordics namakhava awo amahle, izingodo zezingane bezingemuva. Ungabadidanisi laba ababili, ngoba iNordic ifana ne-quilted quilt, kepha inamakhava asusekayo. Ama-Quilts namuhla mncane futhi ululaNgakho-ke, zingathatha indawo enkulu yalezo zimbozo ezifudumele zasebusika.
Enye yezinzuzo ezinhle zokukhetha ama-quilts ezingane ukuthi yiwona isiqeshana esihle sesikhathi sekhefu. Lezo zinsuku lapho kusapholile kancane ebusuku, kepha akwanele ukusebenzisa iNordic. Intwasahlobo ngisho nehlobo isikhathi esikahle sokusebenzisa ama-duvets. Futhi bakhonza ngisho nasebusika, ukugcwalisa iNordic uma kubanda kakhulu. Ngamafuphi, uyisiqeshana esibuyekezelwa inani futhi emhlobisweni, futhi esinemisebenzi eminingi.
Ungazithenga kuphi iziqu zezingane
Izitolo zendwangu zezingane zinalezi zingane zezingane, njengoba seziba umkhuba futhi. Ziyizicucu okulula ukuzifaka, futhi kulula kakhulu ukuzigeza futhi ziyasisebenzela unyaka wonke. Ezitolo ezifana neZara Home esigabeni sezingane zayo kuneziphakamiso eziningi. Singaya nasezitolo ezinkulu noma sibe nezitolo ezifana ne-Ikea. Kuhlelo ezitolo ze-intanethi Ungathola amanani amahle kakhulu namamodeli amaningi neziphakamiso zemibhede yezingane. Ezindaweni ezifana ne-Amazon kunama-quilts ashibhile nabahlinzeki abaningi abahlukahlukene. Kuyindaba yokufuna izindawo ezahlukahlukene zokuthenga, ukuqhathanisa amanani nemibono yabanye abasebenzisi, yize amafemu afana neZara Home engadumazi ngokwezinga.
Iziqu zezingane ngamathoni ayisisekelo
Uma sizohlobisa igumbi lezingane, into elula kunazo zonke kulabo abangafuni ukwenza impilo yabo ibe nzima ngama-quilts khetha lezo ezine-shades eziyisisekelo. Kulokhu sibona ithoni ebomvana noma yepentshisi elungele izinyanga zasehlobo. Ithoni ethambile ehlangana namathoni amhlophe nokhaphethi onemibala. Kukhona neminye imibala esingabheja ngayo njenge-white, beige, grey noma navy blue. Amathoni acacile kuleli cala nawo alula kithina kunokuba sikhetha ama-quilts anamaphethini ahlukahlukene.
Izinti zezingane eziphrintiwe
Lapha sesivele sikhetha okuthile okuyinkimbinkimbi ukuhlanganisa, kepha uma sithanda umphumela akufanele siwuphuthe. Bangu iziprints eziningi ezigqokiwe, kusuka ezimbali kuya kumachashazi we-polka noma izinkanyezi nemivimbo. Kuneziphakamiso ezingapheli futhi okuhle namuhla ukuthi ukuxubana kokuprinta kungumkhuba. Okusho ukuthi, singajoyina amashidi amachashazi we-polka ane-quilt enemigqa nokunye okuphambene nalokho, ngaphandle kokuthi umphumela ube isimanga. Vele, kufanele ubheke amathoni ahlangana kahle.
Iziqu zezingane ezinemiklamo
Uma izingane zingabalandeli be-movie noma i- umlingiswa wekhathuni, Ngokuqinisekile bazothanda konke okuphathelene nabalingiswa babo abathandayo. Njengamanje kunezinhlobo zonke zezinto zokuhlobisa ngezinhlamvu ezifana nabalingiswa abaphambili beFrozen noma iDisney eyaziwa kakhulu. Kulula ukubathola ezitolo eziku-inthanethi, ngakho-ke uma sazi ukuthi izingane zijabule ngento enjengale, singathenga i-quilt yezingane enabalingiswa.
Kukhona nabancane quilts for cribs. Lapho izingane zikhula futhi isikhalazo sisetshenziswa njengombhede, sekuyisikhathi sokusebenzisa lezi zingilazi ezincane. Imiklamo yabo imvamisa intekenteke, inezimbali namathoni we-pastel, ahambisana kakhulu nomhlobiso wamakamelo ezingane. Ziwusizo kakhulu kulezi zingane futhi ziyaguquguquka noma cha.
Ungahlanganisa kanjani ama-quilts wezingane negumbi
Enye yezinkinga esibhekana nayo lapho uthenga ama-quilts ezingane ukwazi abahlanganise nalo lonke igumbi. Kwesinye isikhathi sithola izitolo lapho kukhona ezinye izinto ezihambisanayo ezithengiswayo, njengama-rugs noma amakhethini. Kodwa-ke, uma lokhu kungenjalo, kuzomelwe sigxile emthunzini we-quilt ukuhlanganisa nalezi ezinye izinto. Futhi ukwenza kube lula, kungcono ukhethe ama-shades ayisisekelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Umhlobiso » Hlobisa » Ukukhetha iziqu zezingane zegumbi lezingane
Amabhokisi epulasitiki azogcinwa ekhaya lakho
Izembozo zeDuvet zokugqoka umbhede wakho